Tu Maung Nyo – What is Suu’s official party according to USDP Regime? | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Deputy Prime Minister of the UK highlights Htay Kywe’s case
Aung San Suu Kyi, Democracy Icon of Burma published →
Tu Maung Nyo – What is Suu’s official party according to USDP Regime?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားဝင်ပါတီ ဆိုတာ ဘယ်ပါတီကိုပြောတာလဲ
သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၁
၂၆ သြဂုတ်၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၈ မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ “မစ္စတာ သောမတ်အိုဟေးကွင်တားနား သတင်း” ကိုပဲအဓိကမူတည်ပြီးပြောမှာပါ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စ ကို စပြီးပြောပါရစေ။
ဒီကိစ္စက ဘေးဖယ်ထားမရတဲ့ ထင်သာမြင်သာအရှိဆုံး မတူကွဲပြားမှုတစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မသုံးပါဘူး။ အသုံးအနှုန်းပြောင်းပြီး လွှတ်တော်တင်တယ်ဆိုတဲ့ “ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံနေရသူ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုလည်း လက်မခံပါဘူး။
“ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူမရှိဘဲ ပြစ်မှုကျူးလွန်၍ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူများသာ ရှိကြောင်း” တဲ့။
အကျဉ်းသားလွှတ်ပေးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ က အခုလို ပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို အနှောင့်အယှက်မပြုကြောင်း သေချာသည့်အချိန်တွင် အကျဉ်းသားများအား ပြန်လွှတ် ပေးရန် ရှိနိုင်ကြောင်း” တဲ့။
“အနှောင့်အယှက်မပြုကြောင်း သေချာသည့်အချိန်” ဆိုတဲ့စကားက ထူးခြားပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေ သလိုလို၊ အကျဉ်းကျနေသူတွေကိုယ်တိုင်က ဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးရမှာလိုလို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကပဲ အာမခံချက်ပေးရ မှာလိုလို သဘောမျိုးဖြစ်လို့်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ တစ်လျှောက်လုံးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရေး ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့သုံးကြိမ်အသံလွှင့်တဲ့ “ပိတောက်မြေအသံလွှင့်ဌာန” က NLDကို “ပါတီပျက်”လို့ သုံးပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို “ပါတီပျက်ခေါင်းဆောင်” လို့ သုံးပါတယ်။ သုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်တွေမှာတော့ “ဖျက်သိမ်းပြီး NLD” လို့ သုံးတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုတော့ သတင်းစာထဲမှာ NLD လို့ပဲ ရေးသားသုံးစွဲထားပြန်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ က အခုလိုပြောပါတယ်။
“ NLD နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားရလျှင် NLD သည် ၄င်းတို့၏ သဘောဆန္ဒအလျောက် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်လာရောက်လျှောက်ထားမှု မရှိခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း၊ယခုအချိန်အထိလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်/ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါကြောင်း၊ မည်သူမဆိုနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်လျှင် နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်/ မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း”
“ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူသည် ပါတီဝင်ဖြစ်ခွင့်မရသော်လည်း ထောင်ဒဏ် လွတ်မြောက်သည်နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း ဥပဒေ နှင့်ညီညွတ်လျှင် ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့သည်”
ဒီချုပ်ပြောခွင့်ရတွေက ဘာမှထုတ်မပြောသော်လည်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် ကတော့ အခုလိုထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုပါတယ်။
“ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ inclusiveness ရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြုဖေါ်ညွှန်းသည့် အချက်လည်းပါဝင်ပါကြောင်း ၊ အနာဂတ်ကာလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အရေးကိစ္စများ၌ ပါဝင်မှုသည် သူမတစ်ဦးတည်းပါဝင်ရန် မဟုတ်ဘဲ၊ သူမ၏ တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီပါ ပါဝင်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားဝင်ပါတီနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရတို့သည် အပြန်အလှန်ကူညီသည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် (Reciprocal Basis)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါကြောင်း” တဲ့။
ကျနော်တို့ပြည်သူအများနားလည်သဘောပေါက်ထားတာကတော့ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏တရားဝင်ပါတီ” ဆိုတာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရက “ဖျက်သိမ်းပြီး NLD” လို့ သုံးစွဲနေတာပါ။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏တရားဝင်ပါတီ” လို့ဆိုထားလေတော့ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရ အသစ်ထပ်မံ မှတ်ပုံတင်မည့် သီးခြားပါတီသစ်တစ်ခုလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များကို ရှင်းလင်းပေးသင့်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားဝင်ပါတီ ဆိုတာ ဘယ်ပါတီကိုပြောတာလဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားဝင်ပါတီနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရတို့သည် အပြန်အလှန်ကူညီသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် (Reciprocal Basis) ဆိုတာ ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ၊ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဦးဉာဏ်ဝင်းမှ တဆင့်ပြောကြားချက် (၆) ချက်ကို အမှတ်တရ ပြန်လည် ဖေါ်ပြရမည် ဆိုပါလျှင် –
၂။ တရားမျှတမှုမရှိ၊ တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသည့် ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။ ဥပဒေပါ စည်းကမ်းချက်များ မှာ ဒီမိုကရေစီနည်းမကျ။
Posted by oothandar on August 27, 2011 in Analysis, Tu Maung Nyo